Sawirro iyo Wax kasta oo ka dhacay Pizza House & Posh! – Xeernews24
Sawirro iyo Wax kasta oo ka dhacay Pizza House & Posh!
15. Juni 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Weerarka oo ku bilowday Qarax Loo adeegsaday Gaadhi la dhigay inta u dhexeysa Maqaaxida loo yaqaan Pizza House iyo Meesha la yidhaahdo Posh Treats ayaa kadib Qaraxa illaa 4 Dagaalyahan waxa ay gudaha u galeen Maqaaxida Piza House, kuwaas oo ka dhex billaabay Falal toogasho iyo Qaraxyo isugu jira Maqaaxidaasi.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo gaadhay meesha wax ka dhaceen ayaa muddo ku dhawaad 10 Saacadood ah dagaal kula jiray Dagaalamayahanada gudaha Maqaaxida Biza House ka dagaalamayay.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/Pizza-house.jpg 540 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-15 10:29:122017-06-15 10:29:39Sawirro iyo Wax kasta oo ka dhacay Pizza House & Posh!
Qatar oo sheegtay in ay ciidamadeedii djibouti iyo Eritrea la Baxday Wax ka Ogow Magacyadda madaxda hagar daaminaya dhex dhexaadnimada Somalia ee...